सुत्केरीलाई अमानवीय कष्ट, गोठमा हुर्कंदैछ एउटा पुस्ता | Ekhabaronline.com
| प्रकाशित मितिः बिहिबार, मंसिर २३, २०७३ 12:55:00 AM | 74 पटक पढिएको |
१४ कात्तिक । आज छोरी जन्मिएको १३ दिन भयो । छोरीलाई गोठमा सुताएर धान काट्न खेत गएकी । अब (दिनको ११ बजेको छ) यो घाँस भैसा (भैंसी) लाई हालिदिएर, खाना खाने अनि छोरीलाई दूध खुवाएर फेरि घाँस काट्न जान्या (जाने) हो । स्वास्थ्य (चौकी) नजिकै छ, पाँच मिनेटमा पुगिन्छ । स्वास्थ्यमा गयो भने नियमित जँचाउनु पर्छ, गोठमा बस्नुहुन्न भन्नहुन्छ त्यसैले घरमै बच्चा जन्माएँ, स्वास्थ्य गइनँ ।
रामुदेवी मल्ल, बाजुरा बाँधु , स्वास्थ्य स्वयमसेविका
नबहादुर फडेरा, रुगिन स्वास्थ्य चौकीका निमित्त प्रमुख
९ कात्तिक बिहान बाजुराका पत्रकार प्रकाश सिंह र मेरो यात्रा मार्तडीबाट शुरू भयो । पाण्डुसैन जान हिंडेको एक घण्टा नहुँदै जीप हिलोमा फस्यो । आधा घण्टाको प्रयास पछि हिलो बाटोबाट बल्लतल्ल जीप निकालियो । चार घण्टामा हामी पाण्डुसैन पुग्यौं । त्यहाँबाट तीन घण्टा पैदल हिंडेर हामी कोल्टी पुग्यौं । १० कात्तिक बिहान कोल्टीबाट बाँधुतर्फ हाम्रो यात्रा शुरू भयो ।
नाकै ठोक्किने ठाडो उक्कालोमा सातघण्टा लगाएर ११ कात्तिक दिउँसो १.३० बजे हामी धिम पुग्यौं । सोझ्ै स्वयंसेविका रामुदेवी मल्लको घर गयौं । मल्लको घरमा झेला राखेर अर्की स्वयंसेविका चन्द्रकला बुढालाई खोज्न निस्कियौं । उनले सुत्केरीहरूको घरसम्म पुग्न हामीलाई सहयोग गरिन् ।
गोठको अवस्था हेरेपछि मेरो भोक, तिर्खा र दुखाइ करुणामा बदलियो । यस्तो दुःख शायदै हामीले भोगेका छौं । फोहोर गाईगोठमा सुत्केरी बसेका छन् । साँच्चिकै ढुंगे युग– सानो ढुंगाको चिसो, अँध्यारो, हावा ओहोरदोहोर गर्न नसक्ने गोठ । जहाँ भविष्यका कर्णधारहरू हुर्काइरहेका छन् आमाहरू । ‘सुरक्षित मातृत्व’, ‘नियमित गर्भ परीक्षण’, ‘पोषणयुक्त खाना’ भन्ने नारा मैले काठमाडौंमा पटक–पटक सुनेकी छु । सुदूरपश्चिमको यो दुर्गम पहाडमा आज त्यो सरकारी नारा सम्झ्एिर मेरो मन खिन्न भयो । एकपछि अर्को सुत्केरीसँग कुरा गरें । उनीहरूसँगको संवाद आफैंमा पूर्ण समाचार लाग्यो मलाई । तिनका भनाइमा के छैन ? राज्यको विभेद, समाजको भेदभाव, आर्थिक विपन्नता, अन्धविश्वास र शोषण उत्पीडन । क्यामेरा निकालें, रेकर्डर ‘अन’ गरेर धमाधम अन्तर्वार्ता लिएँ । तीन जिल्लामा एक सातामा भेटिएका सुत्केरीसँग गरिएका ती कुराकानीहरू वास्तवमा अन्तर्वार्ता नभएर उनीहरूले भोगेका दुःख–कष्ट र वेदनाको एकोहोरो प्रस्तुति थियो ।
आखिर किन उनीहरू यतिविघ्न कष्ट भोगिरहेका छन् ? अँध्यारो कोठा, फोहोर गोठमा परालमाथि पुरानो कम्मल, झ्ंिगाको बथान, नजिकै अँगेनो, अँगेनोमाथि बिहानको बासी भात । यो दृश्य देखेपछि काठमाडौंका अस्पतालमा बच्चा जन्माउने सुत्केरीहरूलाई सम्झ्ें । एउटै पुस्ता, एउटै भूगोल, एउटै नागरिकता भएर के गर्नु जीवनशैलीमा आकाश धरतीको फरक छ । हामी सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउनुपर्दछ भनेर महिला अधिकारको कुरा गर्दछौं । आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकार भन्छौं । घर शान्ति नै विश्व शान्तिको अधार, लैङ्गिक हिंसारहित समाज भनेर महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा छौं । तर, मैले भेटेका ती महिलाले देउता खुशी बनायो भने परिवार खुशी हुन्छ भनेर गोठमा बसेको हाकाहाकी बताए । उनीहरू दुःख भोगिरहेका थिए, झ्न् दुःखद् पक्ष उनीहरू भगवानको डरले आफ्नो परिवारको हित होस् भनेर गोठमा बच्चा हुर्काइरहेका थिए । अन्धविश्वासको पराकाष्ठा !
गोठमा बसेका तीन सुत्केरीलाई भेटिसकेपछि मलाई खपिनसक्नु भयो । अभाव, कुपोषण सहेर महीना दिनसम्म दुःखका साथ गाई गोठमा बसेका छन् । आफूभन्दा साना र आफ्नै उमेर हाराहारीका महिलाको यो अवस्था देख्दा लाग्थ्यो– उनीहरूलाई जवानी, जीवन, अधिकार, हिंसा र स्वतन्त्रता के हो भन्ने बुझउनै बाँकी छ । त्योभन्दा पहिला उनीहरू गोठमा बस्नु कति जोखिमपूर्ण कुरा हो भनेर बुझउनु जरूरी छ ।
त्यही दिन हामीले गोठमा बसेकी १२ दिनकी सुत्केरी सरस्वती बुढथापालाई भेट्यौं । उनी ढोकामा बन्चरो झ्ुण्ड्याएर भित्र बसेकी थिइन् । उनले भनिन्, “भूत लाग्छ भनेर बन्चरो झ्ुण्ड्याएको ।” अरू सुत्केरीले जस्तै उनले पनि कम्मरमा हँसिया घुसारेकी थिइन् । यतिसम्म अन्धविश्वास ? रुगिन स्वास्थ्य चौकीकी अनमी प्रेमकला मल्लले भनिन्, “हामीलाई परम्परागत संस्कार तोड्न मुश्किल परिरहेको छ । हँसिया साथमा भयो भने भूत लाग्दैन भन्ने अन्धविश्वास छ ।”
रुगिनबाट हामी बाजुराको कवाडी भन्ने ठाउँतिर लाग्यौं । त्यो मुगु, हुम्ला र बाजुराको केन्द्र थियो । रात पर्न थालिसकेको थियो । डरलाग्दो ओरालो बाटो, लठ्ठीको सहाराले झ्रिरहेका थियौं । बाटामा आठ जना स्थानीयहरू थकाइ मारेर बसिरहेका थिए । हामी पनि त्यहाँ एकछिन बस्यौं । त्यो समूहमा काखमा सानो बच्चा लिएर बसेकी एक जना गर्भवती महिला थिइन् । मैले सोधें, “तपाईंको बच्चा जन्मने कहिले हो ?” उनले मसिनो स्वरमा भनिन् “पुसमा ।” अब पुसको चिसोमा पनि गोठमा बस्नुहुन्छ होला नि ? यसो मात्रै के भनेकी थिएँ त्यहाँका पुरुषले एकैस्वरमा भने “संस्कार मान्नु परिहाल्यो नि !”
बाजुराका दुर्गम गाउँको अवस्था हेरेर दिक्क भएको मन हुम्लाको मैला पुग्दा झ्न् विरक्तियो । गोठमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई त्यहाँका महिलाले वास्तै गरेनन् । परिवारलाई राम्रो हुन्छ भने गोठमा किन नबस्ने ? आफू गोठमा जन्मिएको हो, आफूले पनि गोठमा बच्चा जन्माउँदा राम्रै भइरहेको छ भन्ने उनीहरूको बुझइ थियो ।
हुम्लाका गाउँमा अर्को अनौठो मान्यता ‘सुत्केरीलाई हरियो सागसब्जी र पोषिलो खानेकुरा दिनुहुन्न’ भन्ने रहेछ । यसको असर बच्चा जन्मन नपाउँदै आमालाई पोषणको अभाव हुने रहेछ । हामीले एमालेका जिल्ला नेता देउचे सार्कीलाई भेटेका थियौं । उनले भने, “महिला आफैं देउताको डरले गोठमा बस्छन् हामीले कसरी रोक्नु ।” अचम्म छ, समाजमा जो पीडामा छ दोष पनि उसैको थाप्लोमा ।
बाटो हिंड्दा धेरै ठाउँमा दूध, दही र मोही छ भनेर सोध्यौं । कसैले पनि छ भनेन । गाई, भैंसी भएको घरमा पक्कै होला भनेर सोध्यो ‘छैन’ भन्छन् । मुगुको श्रीकोट पुगेपछि मात्रै किन ‘छैन’ भनेका रहेछन् भन्ने थाहा भयो । ती दुर्गम बस्तीहरूमा दूध खानलाई दलित होइन भन्ने प्रमाणित हुनुपर्ने रहेछ । हामीले भन्यौं, ‘हामी दुई जना बाहुन, एक जना क्षेत्री र एक जना ठकुरी छौं ।’ यस बाहेक मैले महीनावारी भएको छैन, भएको भए यसरी पैदल हिंड्न सकिन्थ्यो भनेर थप एउटा स्पष्टीकरण दिनु प¥यो । महिनावारी भएकालाई पनि दुध दिने चलन रहेनछ । त्यो अवस्था बुझ्ेर मैले आफ्नै समूहका साथीसँग पनि आफूलाई महीनावारी भएको बताइनँ । सुदूर दूरदराजका गाउँमा २२ दिन बिताएर राजधानी फर्किंदा पनि बारम्बार मेरो मनमा एउटै प्रश्न आउँछ, ‘आखिर देउता रिझउन महिलाले कहिलेसम्म सहने यस्तो कष्ट ?’
खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि बाजुरा, हुम्ला र मुगुबाट फर्केर मीना शर्मा साथमा प्रकाश सिंह।